KISMAAYO, Soomaaliya - Madaxwaynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam [Axmed Madoobe] ayaa magaalada Kismaayo ka furmay shir u dhaxeeya hay’addaha amniga ee dowladaha xubnaha ka ah Federaalka Soomaaliya.
Axmed Madoobe oo ka hadlay kulanka kaasi oo ay kasoo qaybgaleen wasiiradda amniga maamul goboleedyadda iyo taliyaasha ciidamada, ayaa ku dheeraaday ka sheekaynta muhiimada ay leedahay midaynta gulufka ka ah Shabaab.
Dowladda Soomaaliya ayuu ku eedeeyay inay ka gaabisay hogaaminta olalaha dalka looga saarayo meelaha ay haatan ka haysto kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida, isaga oo xusay inay ku mashquushay siyaasadda.
Madaxwayne Axmed Madoobe ayaa intaas ku daraya in madaxda Villa Soomaaliya ay ku diirada saarayaan burburinta nidaamka Federaalka dalka, taasi oo uu qaatay wadanka wixii ka dambeeyay dowladii ku meel gaarka ahayd.
"Al-Shabaab hoos udhac ayaa ku yimid, balse dowladda uma soo jeedo in laga xorreeyo dalka. Siyaasadda iyo doorashooyinka maamul goboleedyadda ayey ku mashquulsan iyo burburinta Federaalka," ayuu yiri Axmed Madoobe.
Shirkaan oo maalmo socon doona ayaa ujeedkiisu yahay sidii ay ciidamo isku dhaf ah usameysan lahaayeen dowlad goboleedyadda iyo qaabka loo marayo, xili ay soo jeedin doonan ka qaybgalayaasha afkaaro ku qotonta arrintaasi.
Sameynta ciidamo gaar ah oo ay leeyihiin maamul goboleedyadda ayaa qayb ka ahayd qodobadii ay Madasha Iskaashiga isku raacday shirkii Garowe, kaasi oo ay sidoo kale ku sameysteen Xisbi siyaasadeed oo ay leeyihiin.
Jubbaland ayaa dhawaan ashtako ka dhan ah Taliska Ciidanka xoogga u gudbisay...
Axmed Madoobe oo khudbad xasaasi ah ka jeediyay Shirka Kismaayo [DAAWO]
Soomaliya 08.04.2019. 13:33